Ball biarin, Motor biarin, biarin Manufacturer, Good Quality biarin - Anrui
Anrui Holding Group Co., Ltd., Bụ a otu ụlọ ọrụ abuana ke biarin mbịne, okpomọkụ omume, egweri na nzukọ nakwa dị ka biarin egweri igwe mmepụta na anyị onwe ika WWI. Dị ka a ọkachamara miri uzo bọl biarin emeputa, anyị na-ejide onwe anyị àgwà si ihe onwunwe, usoro na ọgwụgwụ ngwaahịa. WWI biarin na n'ọtụtụ ebe, na-eji maka moto, moto-ụgbọala, ebu usoro, mbuli na escalator, ezinụlọ ngwa, nuclear moto na wdg na-eme ka ụwa bugharia reliably.
Anyị na-enye àgwà nkwa nke 1 afọ n'okpuru nkịtị na-arụ ọrụ ọnọdụ. Naanị ma ọ bụrụ na ọ na-emezughị mere site agba àgwà a afọ, WWI ga-achọ iji dochie okpu amị na ọhụrụ amị otu otu.
Anyị Factory ebiliwo ghọọ a Premier ISO / TS16949: 2009 Certified emeputa nke High quality, eri-irè ngwaahịa
WWI bụ ọkachamara biarin emeputa. Anyị kpamkpam nwere 6 ụlọ mmepụta ihe dị na Huangshan, Hangzhou, Hubei karị.